အင်္ဂလန်၏မိဖုရားဖှဲ့: Lancaster နှင့် York မြို့၏အိမ်များ
Lancaster နှင့်နယူးယောက်မြို့ Queens
08 ၏ 01
Lancaster နှင့် York မြို့၏အိမ်၏အိမ်
ရစ်ချတ် II ကိုမိမိအဝမ်းကွဲ, အနာဂတ်အတွက်ဟင်နရီ IV အားဖြင့်ရာထူးစွန်အတင်းအကျပ်, 1399 ခုနှစ်တွင်ဦးရစ်သရဖူလက်နက်မချ။ ဂျင်း Froissart များ၏ရာဇဝငျခြု မှစ. ။ အမ်း Ronan ရုပ်ပုံများ / ပရင့်ထုတ်ရန်ကောက်ခံရေး / Getty Images
သူက 1399, တသက်လုံးသားမရဘဲအတွက်ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည်အထိရစ်ချတ် II ကို (အလှည့်ထဲမှာအက်ဒွပ် III ၏အကြီးဆုံးသားသူအက်ဒွပ်၏သား, က Black မင်းသား,) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုနှစျယောကျအကိုင်းအခက် Plantagenet ၏အိမ် ထို့နောက်အင်္ဂလန်၏ဦးရစ်သရဖူများအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်။
Lancaster ၏အိမ်အက်ဒွပ် III ကိုရဲ့တတိယအကြီးဆုံးသား, Gaunt ဂျွန်, Lancaster ၏ Duke ထံမှအထီးနွယ်ဖွားမှတဆင့်တရားဝင်မှုပြောဆိုထားသည်။ နယူးယောက်၏အိမ်အက်ဒွပ် III ကိုရဲ့စတုတ္ထအကြီးဆုံးသား, Langley ၏ဦး Edmund, York မြို့၏ Duke အဖြစ်အက်ဒွပ် III ကိုရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးသား, Lionel, Clarence ၏ Duke ၏သမီးမှတဆင့်နွယ်ဖွားကနေအထီးနွယ်ဖွားမှတဆင့်တရားဝင်မှုပြောဆိုထားသည်။
အင်္ဂလန်၏ Lancaster နှင့် York ကရှငျဘုရငျတို့လက်ထပ်အမျိုးသမီးများနေ့အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံမှ လာ. နှင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဘဝများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင်ထိုအအင်္ဂလိပ်ဘာသာမိဖုရားများစာရင်းကိုတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုအခြေခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူင်နှင့်အချို့သောတစ်ဦးထက်ပိုအသေးစိတ်အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ဆက်စပ်။
08 ၏ 02
မာရိသက de Bohun (~ 1368 - ဇွန်လ 4, 1394)
ဟင်နရီ IV, 1399. အဆိုတော်မှ Coronation: အ Harley Froissart ၏အရှင်ဘုရား။ အဆိုပါပုံနှိပ်ပါကောက်ခံရေး / ပရင့်ထုတ်ရန်ကောက်ခံရေး / Getty Images
မိခင်: ဂျုံး Fitzalen
ခမညျးတျော: Humphrey က de Bohun, Hereford ၏ Earl
Gaunt ဂျွန်၏သားသူဟင်နရီ Bolingbroke ဟင်နရီ IV (1366-1413, 1399-1413 အုပ်ချုပ်) ကအနာဂတ်: မှအိမ်ထောင်သည်
အိမ်ထောင်သည်: ဇူလိုင် 27, 1380
မှ Coronation: ဘယ်တော့မှတစ်ဦးမိဖုရား
ကလေးများ: ခြောက်လ: ဟင်နရီ V ကို; သောမတ်စ်, Clarence ၏ Duke; ယောဟနျ, Bedford ၏ Duke; Humphrey, Gloucester ၏ Duke; blanche, လူးဝစ် III ကို, Palatine ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလက်ထပ်; အင်္ဂလန်၏ Philippa အဲရစ်, ဒိန်းမတ်, နော်ဝေနှင့်ဆွီဒင်ရှင်ဘုရင်လက်ထပ်
မာရိသညျ Llywelyn ထံမှသူမ၏မိခင်ဝေလမဟာမှတစ်ဆင့်ဆင်းသက်တော်မူခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းနန်းထိုင်၏ရှေ့တော်၌ကလေးမွေးဖွားသေဆုံး, ထို့ကြောင့်သူမ၏သားအင်္ဂလန်ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်သော်လည်းတစ်ဦးကိုအစိုးရသောမိဖုရားဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
08 ၏ 03
Navarre ၏ဂျုံး (~ 1370 - ဇွန်လ 10, 1437)
Navarre, အင်္ဂလန်ဘုရင် Henry IV ဘုရင်မဖှဲ့၏ဂျုံး။ © 2011 ခုနှစ် Clipart.com
Navarre ၏ဟန္န: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
ခမညျးတျော: Navarre ၏ချားလ်စ် II ကို
ဟင်နရီ IV (Bolingbroke) (1366-1413, 1399-1413 အုပ်ချုပ်), Gaunt ၏ယောဟန်၏သား: မှဘုရင်မကြီးကြင်ယာတော်
အိမ်ထောင်သည်: ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 1403
မှ Coronation: ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 1403
Brittany ဂျွန် V ကို, Duke (1339-1399): ကိုလည်းလက်ထပ်
အိမ်ထောင်သည်: အောက်တိုဘာလ 2, 1386
ဂျုံးဟင်နရီ V. , သူမ၏ stepson အဆိပ်ဖို့ကြိုးစားနေစွပ်စွဲခြင်းနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်
08 ၏ 04
Valois ၏ကက်သရင်း (အောက်တိုဘာလ 27, 1401 - ဇန်နဝါရီလ 3, 1437)
Valois, အင်္ဂလန်၏ဟင်နရီ V ကိုဘုရင်မဖှဲ့၏ကက်သရင်း။ © 2011 ခုနှစ် Clipart.com
မိခင်: Bavaria ၏ Isabelle
ခမညျးတျော: ပြင်သစ်၏ချားလ်စ် VI ကို
ဟင်နရီ V ကို (1386 သို့မဟုတ် 1387-1422, 1413-1422 အုပ်ချုပ်): မှဘုရင်မကြီးကြင်ယာတော်
အိမ်ထောင်သည်: 1420 မှ Coronation: ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 1421
ကလေးများ: ဟင်နရီ VI ကို
ဝေလနယ်၏ Owen AP Maredudd AP Tudur (~ 1400-1461): ကိုလည်းလက်ထပ်
ကလေးများ: ဦး Edmund (မာဂရက် Beaufort လက်ထပ်; သူတို့၏သားဟင်နရီ VII မှာ, ပထမဦးဆုံးရှိဖို့နဲ့နန်းထိုင်၏), ဂျက်, Owen; သမီးငယ်စဉ်ကလေးဘဝသေဆုံး
Valois ၏ Isabella ၏နှမ, ရစ်ချတ် II ၏ဒုတိယမိဖုရားကြင်ယာတော်။ ကက်သရင်းကလေးမွေးဖွားသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
more >> Valois ၏ကက်သရင်း
08 ၏ 05
Anjou ၏မာဂရက် (မတ်လ 23, 1430 - သြဂုတ်လ 25, 1482)
Anjou, အင်္ဂလန်၏ဟင်နရီ VI ကိုဘုရင်မဖှဲ့၏မာဂရက်။ © 2011 ခုနှစ် Clipart.com
Marguerite d'Anjou: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
မိခင်: Isabella, Lorraine ၏ Duchess
ခမညျးတျော: Naples ၏ Rene ငါ
ဟင်နရီ VI ကို (1421-1471, 1422-1461 အုပ်ချုပ်): မှဘုရင်မကြီးကြင်ယာတော်
လက်ထပ်: မေလ 23, 1445
မှ Coronation: မေလ 30, 1445
ကလေးများ: အက်ဒွပ်, ဝေလမင်းသား (1453-1471)
အဆိုပါ Roses ၏စစ်ပွဲများအတွက်တက်ကြွစွာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခြင်း, မာဂရက်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်သားရဲ့သေဆုံးမှုပြီးနောက်အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။
more >> Anjou ၏မာဂရက်
08 ၏ 06
အဲလစ်ဇဘက် Woodville (~ 1437 - ဇွန်လ 8, 1492)
အဲလစ်ဇဘက် Woodville, အက်ဒွပ် IV ဘုရင်မဖှဲ့။ © 2011 ခုနှစ် Clipart.com
အဲလစ်ဇဘက် Wydeville, Dame ဧလိရှဗက် Grey က: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
မိခင်: လူဇင်ဘတ်၏ Jacquetta
ခမညျးတျော: ရစ်ချတ် Woodville
အက်ဒွပ် IV (1442-1483, 1461-1470 နှင့် 1471-1483 အုပ်ချုပ်): မှဘုရင်မကြီးကြင်ယာတော်
လက်ထပ်: မေလ 1, 1464 (လျှို့ဝှက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား)
မှ Coronation: မေလ 26, 1465
ကလေးများ: ဧလိရှဗက် York မြို့ (လက်ထပ်ဟင်နရီ VII); York ကရိ; နယူးယောက်၏ Cecily; အက်ဒွပ် V ကိုကို (မျှော်စင်အတွက်မှူးမတ်တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းအသက်အရွယ် 13-15 အကြောင်းကိုကွယ်လွန်သွား); (နို့စို့အရွယ်သေဆုံး) York မြို့၏မာဂရက်; ရစ်ချက် York မြို့၏ Duke ကို (မျှော်စင်အတွက်မှူးမတ်တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းအသက်အရွယ် 10 အကြောင်းကိုကွယ်လွန်သွား); နယူးယောက်၏အန်း, Surrey ၏ Countess; ဂျော့ခ်ျ Plantagenet (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသေဆုံး); နယူးယောက်, Devon ၏ Countess ၏ကက်သရင်း; နယူးယောက်၏ Bridget (သီလရှင်)
Groby ၏ဆာဂျွန် Grey က (~ 1432-1461): ကိုလည်းလက်ထပ်
အိမ်ထောင်သည်: အကြောင်းကို 1452
ကလေးများ: သောမတ်စ် Gray, Dorset ၏ Marquess နဲ့ Richard Grey က
အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်မှာသူမမှဂုဏ်အသရေတစ်အိမ်ဖေါ်ခဲ့ Anjou ၏မာဂရက် ဟင်နရီ VI ကိုဘုရင်မကြင်ယာတော်။ 1483 ခုနှစ်တွင်အက်ဒဝပ်မှဧလိရှဗက် Woodville ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမမှန်ကန်တဲ့ declered ခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များတရားမဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ရစ်ချက် III ကိုရှငျဘုရငျကိုသရဖူဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရစ်ချက်အယ်လီဇဘတ် Woodville နှင့် Edward IV ၏နှစ်ခုကျန်ရစ်သူ၏သားတို့ထောင်ကျ; နှစ်ခုယောက်ျားလေးများယူဆရရစ်ချက် III ကိုအောက်တွင်သို့မဟုတ်ဟင်နရီ VII အောက်မှာဖြစ်စေ, သေဆုံးခဲ့သည်။
more >> ဧလိရှဗက် Woodville
08 ၏ 07
အန်းနဗီး (ဇွန်လ 11, 1456 - မတ်လ 16, 1485)
အန်းနဗီး, အင်္ဂလန်၏ရစ်ချက် III ၏ဘုရင်မဖှဲ့။ © 2011 ခုနှစ် Clipart.com
မိခင်: အန်း Beauchamp , Warwick ၏ Countess
ခမညျးတျော: ရစ်ချတ်နဗီး, Warwick ၏ Earl
ရစ်ချက် III ကို (1452-1485, 1483-1485 အုပ်ချုပ်): မှဘုရင်မကြီးကြင်ယာတော်
အိမ်ထောင်သည်: ဇူလိုင် 12, 1472
မှ Coronation: ဇူလိုင်လ 6, 1483
ကလေးများ: အက်ဒွပ် (သေဆုံးအသက်အရွယ် 11); မွေးစားတူအက်ဒွပ်, Warwick ၏ Earl
Westminister ၏အက်ဒွပ်, ဝေလမင်းသား (1453-1471), Anjou ၏ဟင်နရီ VI ကိုနှင့်မာဂရက်၏သား: ဖို့လည်းလက်ထပ်
လက်ထပ်: (ဖြစ်ကောင်း) ဒီဇင်ဘာလ 13, 1470
သူမ၏မိခင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်, Warwick ၏ Countess ချမ်းသာကြွယ်ဝမွေဆက်ခံသူကြီးနှင့်သူမ၏ဖခင်ကအင်္ဂလန်၏အက်ဒွပ် IV ရှငျဘုရငျကိုအောင်နောက်ပိုင်းတွင်ဟင်နရီ VI ကို restore ပြန်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရှိသူ၏စိတျအပိုငျးအတှကျ Kingmaker အဖြစ်လူသိများအင်အားကြီးရစ်ချတ်နဗီး, Warwick ၏ 16 ကြိမ်မြောက် Earl, ။ အန်းနဗီးရဲ့နှမ, Isabel နဗီး , ဂျော့ခ်ျ, Clarence ၏ Duke, အက်ဒွပ် IV နဲ့ Richard III ၏အစ်ကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်။
more >> အန်းနဗီး
08 ၏ 08
နောက်ထပ်ဗြိတိန် Queens Find
York နဲ့ Lancaster မိဖုရား၏ဤစုစည်းသင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းမိလျှင်သင်အရမ်းဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအချို့ကိုတွေ့နိုင်:
-Anglo-Saxon နှင့်အင်္ဂလန်၏ဗိုက်ကင်း Queens
အင်္ဂလန်၏-Norman Queens ဖှဲ့: အင်္ဂလန်၏ရာဇဝင်၏ဇနီး
အင်္ဂလန်၏ Plantagenet Queens ဖှဲ့: အင်္ဂလန်၏ရာဇဝင်၏ဇနီး
အလယ်ခေတ် Queens, Empress, နှင့်အမျိုးသမီးအစိုးရသောမင်းတို့
12 ရာစု၏အစွမ်းထက် Queens
Coretta Scott ဘုရင်ကကိုးကားချက်များ
မာရီ Curie Quotes
ဒေါ်ရသီအမြင့်: Civil Rights ခေါင်းဆောင်
Diane ဗွန် Furstenberg Quotes
အဘိဂဲလ (Dane) Faulkner
စိန့် Clotilde: Frankish ဘုရင်မကြီးနှင့်စိန့်
ဩဂုတ်နှင့် The Augustan ခေတ်
Obamacare အကြောင်း 10 အများစုမှာလှောင်ပြောင် Quotes
ယင်းလက္ခဏာများမှတဆင့်တိုးတက်ရေးပါတီမွန်း (Pisces မှ Libra)
အဆိုပါ Stag ၏သင်္ကေတ
'' ကျေးဇူးပြု. Check: 'တစ်ဦးက One-အက်ဥပဒေ Play ကိုယောနသန်သည် Rand အားဖြင့်
သင်က Scuba ထိုးဆင်းမှုနှင့်အတူမျက်မှန်သို့မဟုတ် contact lens နိုင်သလား?
5 ဘုံက Black တီဗီထဲမှာကျပုံစံနှင့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
သင့်ရဲ့ 4x4 Pickup Truck ကားသို့မဟုတ် SUV ကားနှင့်အတူ Tailgate ရန်ကဘယ်လို
Ocher - ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးသဘာဝဆေးရောင်စုံစက္ကူ
Diane Setterfield အားဖြင့် '' ဆယ်သုံးပုံပြင် '- ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
Ablenet ညီမျှ - မသန်မစွမ်းနှင့်အတူကျောင်းသားများများအတွက်တစ်ဦးကသင်္ချာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ပြင်သစ်၏ဗိုလ်မှူးကြိယာ Conjugating: Avoir, Êtreနှင့် Fair
လက်တင် 1st conjugation ကြိယာ
ကလေးတွေကအဘို့အ Cinco de Mayo
စရဖက de 60 profesiones မသန်စွမ်း sacar la ဗီဇာ TN မသန်စွမ်း trabajar en ယူအက်စ်အေ
Kung Fu ၏ရှောင်လင် & Wudang Styles
တစ်ဒဿနိကဗေဒဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ် Pick လုပ်နည်း
သုံးရာဇဝင် - အရှေ့ကနေပညာရှိ
တစ်ဦး Strophic သီချင်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုနားလည်ခြင်း